The Reconstruction: A Visual Album by Gareth Pugh – Ariel's Style
By arielthi2020 21/11/2020 21/11/2020
Talent: Rina Sawayama, Sakeema Peng Crook, Matthew Ball, Jenny Bastet, Travis Clausen-Knight, James Pett, Maggie Maurer, Finn Love, Georgie Bee, Jade o’Belle, Georgia Moot
Creative Direction: Gareth Pugh, Carson McColl
Nails: Lauren Michelle Pirs
Photographic Assistance: Thomas Alexander
Executive Production: Kat Davey at Liberte Productions
Digital Post Production: Epilogue Imaging Ltd
Pandemic ကာလကြီးမှာ Global Crisis ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူသားတိုင်း ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့ Creator တွေအတွက်ကတော့ Covid-19 လိုမျိုး ကပ်ရောဂါကတောင်မှာ သူတို့တွေရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကို ရပ်တန့်နိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ပါဘူး… အဲ့ဒီလိုမျိုး Creator တွေထဲမှာ Designer Gareth Pugh လဲ အပါအဝင်ပါပဲ… London အခြေစိုက် Designer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Gareth Pugh ရဲ့ နာမည်က မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ ရင်းနှီးချင်းမှ ရင်းနှီးပါလိမ့်မယ်… ဒါပေမဲ့လဲ Beyonce’, Rihanna, Lady Ga Ga, Nicki Minaj, Adam Lambert အစရှိတဲ့ Global icon တွေက Gareth Pugh ဖန်တီးထားတဲ့ Design တွေကို ဆုပေးပွဲတွေ၊ ဖျော်ဖြေပွဲတွေ၊ MV တွေ၊ Magazine Cover တွေမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့ဖူးပါတယ်…
Conceptual Fashion တွေကို အသားပေးပြီး ဖန်တီးတတ်တဲ့ Gareth Pugh ရဲ့ Design တွေမှာ Gothic sense ကိုလဲရနိုင်သလို Architectural form တွေရဲ့ အငွေ့အသက်ကိုလဲ သိသိသာသာ ခံစားမိနိုင်တာကြောင့် Gareth ဟာ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး… Spring 2019 Ready to wear fashion show ပွဲပြီးကတည်းက လျှောက်လမ်းပေါ်ကနေ နှစ်နှစ်နီးပါး ပျောက်ကွယ်နေခဲ့တဲ့ Gareth Pugh ကတော့ အခု Spring/summer 2021 အတွက် “The Reconstruction” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ Project အသစ်တစ်ခုနဲ့ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်…
“The Reconstruction” Project မှာတော့ Dress look ၁၃ ခုပါဝင်ပြီး Gareth ရဲ့ Project partner တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Nick Night နဲ့ Collaboration လုပ်ထားတဲ့ Documentary တစ်ခုကိုလဲ ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်ပါသေးတယ်… Model အဖြစ်ပါဝင်ကြသူများကတော့ Activists များ၊ Musicians များအပြင် Ballet Dancer များ Performer များလဲ ပါဝင်တာကြောင့် Gareth ရဲ့ Comeback ကတော့ ပိုပြီးမြိုင်ဆိုင် ခဲ့ပါတယ်… Collection တစ်ခုလုံးရဲ့ အဓိကပေးချင်တဲ့ Message ကတော့ ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာများကို မီးမောင်းထိုးပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး look တစ်ခုချင်းစီကလဲ သီချင်း တစ်ပုဒ်ချင်းစီက concept ယူထားတာမို့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်း တာ အမှန်ပါပဲ…
နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုက ဒီ Project တစ်ခုလုံးကို live exhibition နဲ့ ပြသသွားခဲ့ပြီး ရသမျှ အမြတ်အစွန်းများကိုလည်း Refuge များနဲ့ Charity များကို လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်လို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက Fashion ချစ်သူများရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းကို လည်း အထူးခံခဲ့ရပါတယ်… အဲ့ဒါဆို ဘယ် look တွေကို ဘယ်လို သီချင်းတွေကနေ inspire ယူပြီး ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
1. The Toreador
Collection တစ်ခုလုံးအတွက် ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်လာတဲ့ look လေးကိုတော့ The Toreador လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်… Toreador ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင် နွားရိုင်းသတ်သမားလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်… ဒီ look လေးရဲ့ Inspiration ကတော့ စပိန်နိုင်ငံက Flamenco dance song type ဖြစ်တဲ့ Duende ဆိုတဲ့ သီချင်းက လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်… Flamenco အကရဲ့ အဓိကဖြစ်တဲ့ သံစဥ်တေးသွားတို့ နဲ့လိုက်အောင် ခန္ဓာကိုယ်ကို မာန်ပါပါလှုပ်ရှားရတဲ့ဟန်ကို အဓိက Concept ယူပြီး ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်…
နောက်ထပ် Gareth ရဲ့ Vision တစ်ခုကတော့ ဒီ Dress ကို ဝတ်ဆင်မဲ့သူကို စစ်ပွဲတစ်ခုရဲ့ အောင်နိုင်သူအဖြစ်လဲ ပုံဖော်ချင်ခဲ့ပါတယ်… စစ်ပွဲတို့ရဲ့သဘောတရားအတိုင်း နှစ်ဖက်စလုံး အထိခိုက်အပျက်အစီး ကိုယ်စီရှိသော်လည်း အဆုံးမှာ တစ်ယောက်တည်းအောင်နိုင်သူအဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့သော စစ်ဘုရင်မတစ်ပါး၏ ဟန်ကို စိတ်ကူးထဲတွင် ကြိုတင်ပုံဖော်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်ကြောင့်လဲ ဒီလို Powerful ဖြစ်တဲ့ Editorial ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို Nick Night နဲ့ အတူ Gareth အလွန်သဘောကျရသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Maggie Maurer က Model အဖြစ် ပါဝင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်…
ဒုတိယမြောက် Look အနေနဲ့ The Shard (သို့မဟုတ်) အချွန်အတက်လို့ အမည်ရတဲ့ Piece လေးကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်… Statue တွေကို ကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို Inspire ယူထားပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ နီဗားဒါးပြည်နယ်က Hoover Dam မှာ ထားရှိတဲ့ Guardian angels တွေရဲ့ အသွင်နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်…
ဒီ Second Look ကိုတော့ ဝတ်စုံကို မြင်ရမဲ့သူတွေကို ခံစားစေချင်တဲ့ပုံစံကို ဦးစားပေး ဖန်တီးခဲ့တာကိုလဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်… အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကနေ ထွင်းဖောက်ပြီး ထိုးထွက်လာတဲ့ အချွန်အတက်ဟန်ရှိတဲ့ ဒီ Look မှာတော့ Musician တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Rina Sawayama က Statue တစ်ခုအသွင်အတိုင်း Concept မိစေဖို့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်…
3. The Communion
တတိယမြောက် Look ကတော့ Dress ဆိုတာထက် Surrealist sculpture တစ်ခုလို့ပြောမယ် ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်… ဒီ Sculpture ကိုတော့ Communion လို့ နာမည်ပေးထားပြီး Choreographer နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Travis Knight နဲ့ James Pett တို့က Hand Model တွေအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်…
အဓိက Concept ကတော့ 1960 ဝန်းကျင်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်များကို တောင်းဆိုတဲ့ Body Against Machine ဆိုတဲ့ Movement ကို အခြေခံထားပြီး James နဲ့ Travis တို့က အိန္ဒိယအဆိုတော် Sheila Chandra ရဲ့ Speaking in Tongues II ဆိုတဲ့ တေးသွားအတိုင်း ကပြပုံဖော်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… Choreographer နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ Hand Movement တွေက Sign Language ကို အခြေခံကာ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး “No Rule” လို့ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်…Dress တွေကိုသာမက Sculptural pieces တွေကိုလဲ ဖန်တီးနိုင်ကြောင်းကို Gareth က ထပ်ပြီး သပ်သေပြလိုက်သလိုပါပဲ…
အခုထပ်ဖော်ပြပေးမဲ့ Look No.4 ကိုတော့ Musician တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ IAMDDB က ပါဝင်ရိုက်ကူးပေးထားပြီး The Iron Lady လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်… Artist တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Antony Gormley ရဲ့ Angel of the North ဆိုတဲ့ Statue ကို အခြေခံကာ Pina Bausch လို့ အမည်တွင်တဲ့ German dancer ရဲ့ ကကွက်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဒီ look လေးကို ဖန်တီးထားပါတယ်…
Structural Site တွေမှာ ဆီတူးဖော်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို inspire ယူပြီး ဖန်တီးခဲ့တာကြောင့် ဒီ Dress မှာလဲ Oil stained တွေစွန်းနဲ့တဲ့ Rustic structure တွေကို မြင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
The boss လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ Look No.5 ကတော့ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် အထာကျကျ Girl Boss vibe ကို ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို မြင်ရပါတယ် … အဓိက Concept ကတော့ New York City ရဲ့ 1970’s ရဲ့ Nostalgic gesture ကိုမှ Massive Attack ဆိုတဲ့ Music Group ရဲ့ Unfinished Sympathy ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် Shara Nelson နဲ့ A Most Violent Year ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းထဲက မင်းသမီး Jessica Chastain တို့ရဲ့ အထာကျတဲ့ Smart and strong lady ပုံစံတို့ကို ရောပြီးဖန်တီးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Women Empowerment ကိုလဲ ထည့်သွင်းစဥ်းစားခဲ့တဲ့ Gareth က စိတ်ကူးထဲမှာ ပုံဖော်ထားတဲ့ the Boss ဆိုတဲ့ ဒီ Editorial လေးကိုတော့ Model တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Helene Selam Klieh နဲ့ အတူ တွဲဖက်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်…
အခုထပ်ပြောပြပေးမဲ့ Look လေးကတော့ Sphinx လို အမည်ရပြီး Gareth ကိုယ်တိုင်ကိုက ဒီ Collection တစ်ခုလုံးအတွက် ပြုလုပ်ရမှာ အခက်ခဲဆုံးဝတ်စုံလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်… မူလ Concept ကတော့ Egypt ဘုရင်တွေရဲ့ ဝတ်စုံတွေနဲ့ Sphinx ရုပ်ထုတွေရဲ့ ဟန်ကနေ ဆင်းသက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်… ဒါပေမဲ့ ဝတ်စုံကို ချုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ Sphere ဆန်ဆန် Conceptual dress ဖြစ်နေတာကြောင့် အများကြီးအခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်…
အဓိကက Symmetric spherical shape ဖြစ်နေတာကြောင့် မီလီမီတာ တစ်ခုစာတောင် အလွဲမခံဘဲ ဖြတ်တောက်ချုပ်ဆက်ခဲ့ရကြောင်းကိုလဲ Gareth က အသိပေးခဲ့ပြီး Spherical pattern ကို concept ယူရာမှာလဲ Black Hole တို့ Portal တို့ရဲ့ Spiral pattern ကို concept ယူခဲ့ရတယ် ဆိုတာကိုလဲ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် …ဒီဝတ်စုံအတွက်တော့ Model တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Georgia Moot က ပါဝင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်…
7. Hysteric Glamour
Look No.7 ကတော့ တော်တော်လေးထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Gareth ရဲ့ Collection တွေမှာ တွေ့ရခဲ့တဲ့ Glam look ကို တွေ့နေရလို့ပါပဲ… Hysteric Glamour လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဒီ Dress လေးရဲ့ Concept ကတော့ 70s ရဲ့ Non-binary singer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sylvester နဲ့ သူ့ရဲ့ သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ One Night Only တို့ကို ပေါင်းစပ်ကာ ဖန်တီးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
Material ရွေးချယ်ရမှာလဲ Disco Glam vibe ပေးနိုင်ဖို့ Ostrich Feather ကို အဓိကအသုံးပြုခဲ့ပြီး ဆံပင်နဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေမှာတော့ 70s Magazine Cover တွေမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Transparent bugle beads တွေကို ဆံပင်နဲ့ နှုတ်ခမ်းမှာ ကပ်စေခဲ့ပြီး Glamour ဖြစ်အောင် ပိုပြီးအလှဆင်ခဲ့ပါတယ်… ဒီ Editorial အတွက်တော့ လူမည်း Artist တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jenny Bastet က လိုက်ဖက်လှစွာ သရုပ်ဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်…
8. The Firestarter
ဆက်ပြီးပြောပြပေးမဲ့ Look လေးကတော့ Artist တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Finn Love က Cross-dresser တစ်ဦးအနေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဖော်ပေးထားပါတယ်… Editorial မှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်… ဒီ ဆံပင်နီကောက်ကောက်အထုံးတွေနဲ့ ဒီလို Makeup အပြင်အဆင်တွေက Queen Elizabeth I ရဲ့ ဟန်ပန်တွေဆိုတာကိုပေါ့…
Queen Elisabeth I တင် မကပါဘူး… Sex pistol ဆိုတော့ rock အဖွဲ့ရဲ့ Lead singer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Johnny Rotten ရဲ့ သီချင်းတွေကိုလဲ Inspire ယူထားပါသေးတယ်… ဆန့်ကျင့်ဘက် concept နှစ်ခုကို ပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတယ်ထင်ရသော်လဲ ရဲရင့်တက်ကြွတယ်ဆိုတဲ့ Youth Development နဲ့ Youth Culture ကို ထင်ဟပ်နေစေချင်တာမို့ Editorial က ပိုပြီး အသက်ဝင်လာတယ်လို့ ခံစားရစေပါတယ်…
9. Spirit of Ecstasy
Look No.9 ကလဲ Sculptural Artwork တစ်မျိုးပါပဲ… Spirit of Ecstasy လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီ Editorial လေးကတော့ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကာလတစ်ခုကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေပေမဲ့ အတိတ်ကို ခဏတစ်ဖြုတ် ပြန်လှည့်ကြည့်မိတဲ့ အသွင်ကို ဆောင်နေပါတယ်…
မူလ Concept ကတော့ အီတလီပန်းချီဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Umberto Boccioni ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ “Unique forms of continuity in space” ဆိုတဲ့ ရုပ်ထုပဲ ဖြစ်ပါတယ်… မူလပထမ ရုပ်ထုမှာကိုက Musical movement တစ်ခု ပါနေတာကြောင့်မို့ Gareth က အခုဖန်တီးခဲ့တဲ့ Sculpture မှာလဲ Principle dancer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Matthew Ball ကို ပါဝင်ဖန်တီးစေခဲ့ပါတယ် … Matthew ရဲ့ Athletic body နဲ့ Sculpture ရဲ့ Rigid structure နှစ်ခု ပေါင်းစပ်မှုက အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ Editorial ပုံတစ်ပုံပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်…
Collection တစ်ခုလုံးထဲမှာ Social Message အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ look ကတော့ အခုပြောပြပေးသွားမဲ့ The Dissident ဆိုတဲ့ Look လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Black Lives Matter Movement ကို အခြေခံကာ ဒီ Movement အတွက် တောင်းဆိုဆန္ဒပြတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Look တစ်ခုကို Gareth က ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်…
အဆိုတော် Solange ရဲ့ Weary ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ Joan of Arc တို့ကို Inspire ယူခဲ့တဲ့ ဒီ dress မှာတော့ Armor တွေပါ ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး တကယ့်ကို Strong and powerful look ကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်… ဒါ့အပြင် BLM movement မှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ Black transwomen တစ်ဦးလဲဖြစ်သလို Artist/Activist တစ်ဦးလဲဖြစ်တဲ့ Sakeema Crook ကိုယ်တိုင်က Model အဖြစ် ပါဝင်ထားတာကြောင့် Editorial ရဲ့ ပေးချင်တဲ့ Message ဟာ ပိုပြိး ထင်ရှားလာခဲ့ ရပါတယ်…
11. The Drone
ထပ်ပြီးပြောပြပေးချင်တဲ့ Look လေးကလဲ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်… အဆိုတော် Joni Mitchell ရဲ့ စစ်ပွဲတွေအကြောင်းကို ရေးထားတဲ့ Woodstock ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို အဓိက concept ယူပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီ look လေးဟာ တော်တော်လေးလဲ ကြေကွဲဖို့ကောင်းပါတယ်…
စစ်ပွဲတွေဟာ အမုန်းတရားတွေကို ဖန်တီးတယ်… စစ်ပွဲတွေကြောင့် လူတွေသေကြေ ပျက်စီးရတယ်… ကောင်းကင်ပေါ်က လိပ်ပြာတွေလို ပျံဝဲနေတဲ့ ဒုံးကျဥ်တွေနဲ့ ထိခတ်မိတာကြောင့် လူသားတွေဟာ အမှုံအမွှားတွေဖြစ်ကုန်ရပါတယ်လို့ ရေးသားထားတဲ့ စာသားလေးအတိုင်းပါပဲ…
စစ်ဖြစ်တာနဲ့ မပြန်လမ်းကိုသွားရဖို့ နီးစပ်နေပြီးမို့ The Lady of Shalott ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားထဲက Shalott ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အသွင်နဲ့ Missile တွေရဲ့ဟန်ကို ရောနှောကာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဒီ look ဟာလဲ ထူးခြားနေတာတော့ အမှန်ပါပဲ… ဒီ Editorial လေးမှာတော့ Model တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Georgia Bee က ပါဝင်ရိုက်ကူး ပေးထားပါတယ်…
၁၂ ခုမြောက် look လေးကတော့ ယခုလတ်တလော ကြုံတွေ့နေရတဲ့ Global Pandemic ကို သိသိသာသာ ဖော်ညွှန်းထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… Aphex Twin ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ Windowlicker ဆိုတဲ့ Music Video ကို Inspire ယူထားပြီး Plague doctor တွေ သုံးတဲ့ Mask ကို inspire ယူထားတဲ့ headpiece mask ကို သုံးကာ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီ look ကိုတော့ ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် Artist တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Georgie Bee က ကူညီဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်…
Gareth ရဲ့ Dress, Georgie ရဲ့ Movement နဲ့ Nick ရဲ့ ရိုက်ချက်သုံးခု စုံစည်းချိန် မှာတော့ ခုလိုမျိုး လက်ရာမြောက်တဲ့ Editorial တစ်ပုံကို ခံစားရတော့တာပါပဲ…
Collection တစ်ခုလုံးရဲ့ နောက်ဆုံး Series ကတော့ Dress တွေ Sculpture တွေ ဘာတစ်ခုမှ မပါဝင်ပဲ သီးသန့်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Editorial လေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ကမ္ဘာကြီးဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပျက်စီးယိုယွင်းလာတယ်…
အမုန်းတရားတွေနဲ့ စစ်ပွဲတွေကို နေ့တိုင်းကြုံတွေ့လာရတယ်…
ဒါပေမဲ့ မိခင်ကမ္ဘာမြေကြီးရှိနေသေးသရွေ့တော့ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ နေထိုင်သွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ကမ္ဘာမြေရဲ့ နတ်သမီးဖြစ်တဲ့ Gaia ကို concept ယူကာ Classical Art ဆန်ဆန် Nude shoot လေး ရိုက်ထားတာကို တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ရိုးရှင်းပေမဲ့ Gaia ရဲ့ ဟန်ပန်ကို ထိမိစွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Collection တစ်ခုလုံးရဲ့ အဆုံးသတ်လဲဖြစ်သင့်သလို အလှဆုံးလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
Conceptual လို့ အမည်တွင်ပြီး Form တွေနဲ့ အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Fashion တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အတန်ငယ် ဝေးကွာ နေသေးတာမို့ Conceptual Fashion ကို မိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ သမားရိုးကျမဟုတ်ပဲ ကွဲထွက်နေတဲ့ Gareth Pugh တို့လို Fashion Designer တွေကိုလဲ လေ့လာသင့်တယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်တာမို့ အခုလို Editorial program မှာ ထည့်သွင်းရေးသားပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
နိုင်ငံတကာက Artist တွေ ဘယ်လိုမျိုး Inspiration တွေယူတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုး Concept တွေ ယူတယ်ဆိုတာရယ် ဘယ်လိုမျိုး Teamwork ကောင်းကောင်းနဲ့ Collaboration တွေ လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလဲ တွေ့ရမှာမို့ စာဖတ်သူများလဲ သဘောကျကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…
Collection တစ်ခုလုံးက Visual Album အနေနဲ့ ထုတ်တာမို့ Editorial ပုံတွေသာမက Digital Animation နဲ့ Documentary Video လဲ ပါတာမို့ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ Fashion ချစ်သူများ ကြည့်နိုင်အောင် link တွေကို အောက်မှာ တွဲပြီး ထည့်ပေးထားပါတယ်…
နောက်ထပ် ဘယ်လိုခေါင်းစဥ်တွေ ဖော်ပြပေးသွားဦးမယ်ဆိုတာလဲ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦး….
CategoriesBlog Editorial Article BlogTagsDesignEditorialFashionFashionEditorialFashionLook-bookGareth PughSS21thifashionalliances
Previous5 Trendy Jeans in 2020 & How to wear it
NextMoon Ga Young ; Find me in your memory’s Look-book